Khin Maung Chin: အမှား
24 March 2011 9:31 PM ♦♦♦တင်ပြတဲ့ငနဲက♦♦♦ KMC@ချင်းလေး
မင်္ဂလာပါ. ကျနော်အရင်ကနောက်နာမယ်တစ်ခုနဲ့တခြားဘလောက်တစ်ခုရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုး
လိုလားမိတာမို့ကိုယ်နဲ့ဝါသနာတူ တူသူခြင်းနီးစပ်လာကြမှာကိုလည်းစိတ်လှုပ်ရှားစွာစောင့်မျှော်နေမှာပါ။ ပညာသည်တွေပုံအောနေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ ကျနော့်ဘလောက်လေးကထူးထူးခြားခြားဘာမှရသမပေးနိုင်ရင်
တောင်သူငယ်ချင်းတို့နဲ့ကျနော်ခံစားချက်ခြင်းဖလှယ်နိုင်ပြီး နားလည်မှု့လေးတစ်ခုတည်ဆောက်ပေးနိုင်လိမ့် မယ်လို့တော့မျှော်လင့်မိပါတယ်။။။။
ကျနော့်ရဲ့ပထမဆုံးဒီပို့စ်လေးမှာလူတိုင်းလူတိုင်းမလွဲမသွေကြုံကြရတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကို သူငယ်ချင်းတို့အားလုံး (တကယ်တော့အားလုံးသိထားပြီးသားပါ) သိရအောင်တင်ပြခွင့်ပြုပါနော်။
လူတိုင်းမှားတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလောကကြီးမှာ အမှားနဲ့ကင်းသူမရှိနိုင်ပါဘူးလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာ။ တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့အမှားဟာအဲဒီလူပြုလိုက်မိတဲ့အဖြစ်အပျက်၊ အကြောင်းအရာပေါ်မူတည်ပြီး အမှားသေးတာနဲ့
အမှားကြီးတာ၊ ဒါမှမဟုတ်အမှားနည်းတာနဲ့ အမှားများတာပဲ ကွာကြပါလိမ့်မယ်။ သေချာတာတစ်ခုကတော့အမှားနည်းတဲ့သူက
ကျနော်ပြောတာသူငယ်ချင်းတို့လက်ခံမလား? လူတစ်ယောက်ကအမှားလဲလုပ်မိတယ် ။။ ပြီးတော့သူ့လောက်အမှားမလုပ်ထားတဲ့သူထက်လဲပိုပြီးစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်သေးတယ်ဆိုတာ (သူသာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမညာပဲပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့) လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ။။။။ မုချမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ထားပါတော့လေ... စကားဆက်ပါရစေ။
တစ်ဖက်ကလဲ ``ငါမှားတာဘာဖြစ်လဲ´´ဆိုတဲ့..ကိုယ့်ရဲ့မှားခြင်းကိုပဲ ခုံမင်နှစ်သက်သူများလည်း ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ဘာကြောင့်သူမှားရပါတယ်ဆိုတာနဲ့လည်းသက်ဆိုင်နေတယ်လေဗျာ....နော့်???
အင်မတန်မှသနားဖို့ကောင်းတဲ့သူများပဲ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ... သူငယ်ချင်းတို့အမြင်ကရော??? လူတစ်ယောက်က အမှားသေးတာကို
နောက်ကိုလဲမဆင်မခြင်အမှားသေးလေးတွေဆက်တိုက်လုပ်နေရင်းက သိပ်မကြာခင်မှာ အင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းလောက်တဲ့အမှားကြီးကြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ လွယ်လွယ်နှိုင်းပြောရရင် ကျနော်တို့မြန်မာစကားမှာပြောလေ့ရှိကြတယ်လေဗျာ.. (အမှိုက်ကစ ပြသာဒ်မီးလောင်) လို့ပြောလေ့ရှိကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားဗျာ..။ မြန်မာစကားပုံများ ဆိုတဲ့ဆိုဒ်ထဲမှာတော့အဲဒီစကားရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို
(သေးငယ်သော အမှိုက်စကလေးကို စွဲလောင်သည့် မီးပင်လျှင် မီးအားကြီး ကူးစက်၍
ငယ်သော အမှုကလေးသည်ပင် ကြီးသော ပြဿနာကြီးဖြစ်စေနိုင်သဖြင့်
အမှုကိစ္စအစွန်းအစကို ငယ်သည်ပမာမထား၊ သတိပေါ့ဆခြင်း မပြုသင့်ကြောင်း တင်ပြသုံးနှုန်းသည်။...)လို့ဆိုထားလေရဲ့။
ဒါကြောင့်ပါ။ ကိုယ်မှားတာကိုမှားနေပါလားဆိုပြီးမြင်တတ်ရင် အဲဒီအမှားရဲ့တစ်ဖက်မှာအမှန်ဆိုတာရှိပါတယ်။ ရှိတယ်ဆိုတာရဖို့လမ်းစဖြစ်နေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာ။ ဟီးးးးဟီးးးဟီးး အမှားအကြောင်းတော့တော်လောက်ပါပြီဗျာ။
နောက်တစ်ဖက်မှာတော့အမှန်ဆိုတာကိုပြောပါရစေ။ အဲဒီအမှန်ကိုများများလုပ်မိတဲ့သူကတော့ ချမ်းသာရာရနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်စိတ်ချမ်းသာမှုပေါ့ဗျာ ။ ဒီနေရာမှာလည်းပြောစရာရှိလာတာက အမှန်လုပ်တာတောင်အကောင်းမမြင်ကြ၊ အကောင်းမပြောကြဘူးဆိုတဲ့ တစ်ချို့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့မှတ်ချက်စကားတွေပါပဲ... ကျနော်ပြောပြပါ့မယ်.. အဲလိုအကောင်းမမြင်ကြတာတွေ
ကိုဥပေက္ခာပြုကြည့်လိုက်ပါ.. ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာတွေကိုပဲလုပ်နေလိုက်ပါ။ ပြီးတော့အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုလောက်စောင့်ကြည့်လိုက်ပါ။ အဲလိုအမြင်မကြည်လင်တဲ့ (အပြစ်ဖို့တဲ့သူတွေကပဲပြန်ပြီး သူတို့ရဲ့အပြစ်တင်စောသွားတာကို နောင်တရနေကြမှာပါ) သူတွေရဲ့အမြင်တွေကြည်လင်လာမှာပါနော်.. (မျက်စင်းဆေးခတ်လိုက်လို့:P) ပြီးတော့အမှန်လုပ်လိုက်လို့ စိတ်ညစ်ရရင်တောင်ခေတ္တခဏပဲညစ်ရမှာပါ။ ဒါကတော့ငြင်းလို့မရတဲ့အမှန်တရားပါပဲ..
တစ်ချို့သူတွေဟာ မိမိအမှားက မိမိနောက်လိုက်ပြီး
နှောင့်ယှက်နေသလိုထင်နေရင်း အမှန်ကိုလိုချင်လာကြပါတယ်။ နောက်ကျောမလုံတဲ့သဘောလို့ပြောရင်လည်းမှန်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင်တော့
အဲဒီသူတွေဟာအမှန်ကို ရောက်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းပိုများလာကြပါပြီ။ ဝမ်းသာအားရကြိုဆိုသင့်တဲ့နောက်ကျောမလုံခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ..။
ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စ(သို့မဟုတ်) ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ကိစ္စဟာ
မှားနေတယ်လို့ သိလာရင် ချက်ချင်းမလုပ်တော့ဘဲ ရပ်ပစ်လိုက်ခြင်းဟာ
အကောင်းဆုံးလို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ အမှားမှာတော့ ပျော်မွေ့မနေနဲ့ပေါ့ဗျာ.။ ပျော်မွေ့ပြီးဆက်မှားချင်နေရင်တော့အမှန်ကဝေးသထက်ဝေးသွားလိမ့်မယ်လေ။
မှားခဲ့တဲ့ ကိစ္စ ၊ ဥပမာ နောင်တပေါ့ ။(နောင်တရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့
ပြုသင့်သည်ကို မပြုမိ ၊မပြုသင့်သည်ကိုပြုမိသောကြောင့် အချိန်လွန်မှ
ပူပန်ခြင်းတဲ့..ဗျာ..... ။)ကဲ ဘာများထပ်လုပ်ကြဦးမှာလဲ???????
ပြီးခဲ့တဲ့အမှားကိုခဲဖျက်ဝယ်ပြီး ဖျက် လို့မရတော့ဘူးဆိုတာတော့သူငယ်ချင်းတို့အားလုံးသိကြမှာပါနော်။
အမှားကိုပြင်ဖို့က ရှေ့ဆက်မှန်နေဖို့ဘဲလိုပါတယ်။ ဒါအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နည်းလေးပါ။။။။။
မှားနေခဲ့ရင်ချက်ချင်းရပ်ပြီးအမှန်ကိုလျှောက်နိုင်ဖို့နည်းလမ်းရှာပါ။ ကြိုးစားပါ။ လူဖြစ်ပြီးလို့ လူဖြစ်ရခြင်းကြောင့်မရည်ရွယ်ပဲ လွန်ကျူးရတဲ့ကိစ္စတွေ၊ အမှားတွေကိုပြင်နိုင်ဖို့အတွက် တွေဝေခြင်းကင်းစွာ
ရှေ့ဆက်ပါ။ ရင်ဆိုင်ပါ။ အောင်မြင်တဲ့လူဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတာကျနော်ပြောရဲပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ဒီပို့စ်လေးက သံသရာထိကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။
ကျနော်တောင်းပေးတာက '' အမှားနည်းနိုင်ကြပါစေလို့ ''လေ ... အမှန်ဆို အမှားတွေလည်းကင်းကြပါစေလို့ပါ ဆုတောင်းပေးရမှာလေ..ခွီးးခွီးးးခွီးးး ဒါပေမယ့် အဲလိုဆုတောင်းမပေးတော့ပါဘူး ။။။။။ ဘာလို့ဆိုတော့ ကျနော်ကိုယ်တိုင်အမှားသံသရာထဲမှာနစ်နေဆဲမို့ပါဗျာ..
(မှတ်ချက်) ။ ။ ။ သူငယ်ချင်းတို့ကိုဆရာကြီးဆန်ဆန်ဟောပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော် ။ ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီပို့စ်လေးကိုရေးလိုက်တာပါ ။ ။
နားလည်ပေးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ် ။ ။ ။
♦♦♦အကြောင်းကတော့ဗျာ♦♦♦ ရေးမိရေးရာလေးပါ0ယောက်ကဒီလိုအားပေးထောက်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်